"Shaqo la´aantu waa cadowga ugu weeyn ee Soomaaliya ka jira" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay torsdag 16 februari 2017 kl 10.37
Haweenka,curyaaminta iyo dhallinyarada
Haween magaalada Hergeeysa wax ka iibinaya. sawir: SAYYID AZIM
-Marka ugu horreeysa in dib u heshiisiin iyo kalgacal lugu abuuro dadka dhexdooda. Midda kale ayaa ah in la dhiirigaliyo dhalinyarada waddanka jooga in ay shaqeeystaan iyo in kor loo qaado waxbarashada.
Abdi Addow safiirka Fursad Found.
Fursad Found ayaa ah sanduuq shaqaale oo loogu talo galay in shaqo loogu abuuro soomaalida aan shaqada haysanin ee Soomaaliya jooga. Ururkan ayaa la asaasay sannadkii hore si dhallinyarada waddankas jooga lugu dhiirigaliyo in ay Soomaaliya sii joogaan. Khaasatan ayaa la doonaya in saddex qeybood oo ka mid ah bulshadda aad loo sii caawiyo. kuwaas ayaa ah haweenka,dhalinyarada iyo curyaamiinta, ayuu sheegay Abdi Addow oo ah safiirka Fursad Found u fadhiya Iswiidhan.
Todobaadkii hore ayuu ururkani saddex kullan ka qabtay magaalooyinka Stockholm, Malmö iyo Borlänge. Waa markii ugu horreeysay ay dibadaha u soo baxaan si lacag loogu ururiyo soomaalida Soomaaliya ku nool. Ujeedada ururkan ayaa ah in qof kasta oo is qora bixiyo 1 dollar maalin walba sannadkii.
-Stockholm oo kale waxaan ogahay in ay 40 qofi ka soo qeeyb galeen kulnkaas. 35 ka mid ah kuwaas ayaa is qoray si ay lacag u bixiyaan, ayuu jidhi.
Wuxuu rajeeynaya in ay tiradu gaadho 5000 oo qof oo maalin walba bixiya 1 dollar. In kasta oo lugu dhiirigaliyay soomaalida qurbaha jooga in ay lacagtan ururiyaan lacagaha ugu bada ee la ururiyay ayaa ka timid soomaalida Soomaaliya degan. Lacagtaas ayaa hadda maraysa 41 000 oo dollar, waa sida u sheegay safiirka Fursad Found Abdi Addow:
-Shaqo l´aantu waa cadoowga ugu weeyn ee Soomaaliya ka jirta, waa ta sababta in ay dhalinyaro badani waddanka ka soo tahriibaan amba ku biiran ururka argagaxisada ah ee Al-Shabaab. Ilaa iyo hadda waxaa saddex mashruuc laga qabtay magaalooyinka Baidhaba, Hargeeysa iyo Muqdisho. Tusaale ayaa haweenka muqdishu ku iibiya hilibka iyo qudaarka lacag la siiyo si ay xor u noqdaan ganacsigoodu na kor u kaco. Baidhaba waxaa ka diwaangelisan 520 qof oo curyaan ah. 16 ka mid ah ayaa loo weeyneeyay beerti ay iska lahaayeen.
Abdi Addow safiirka Fursad Found u fadhiya Iswiidhan.